DEG DEG: Xaliimo Yareey oo ku dhawaaqday doorasho ”qof iyo cod ah” & muddo kordhin | Hadalsame Media
Home Wararka DEG DEG: Xaliimo Yareey oo ku dhawaaqday doorasho ”qof iyo cod ah”...
DEG DEG: Xaliimo Yareey oo ku dhawaaqday doorasho ”qof iyo cod ah” & muddo kordhin
(Muqdisho) 27 Juun 2020 – Guddoonkaa Guddiga Madaxa BanNaan ee Doorashooyinka, Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yarey), ayaa Baarlamanka iyada oo ka hadashay qadiyadda la xiriirta Doorashada 2020/2021-ka oo aad loogu muransan yahay.
Xaliimo Yareey oo ku dheeraatay sharraxaadda waxa uu yahay, qaabka loo dhisay iyo mug dhisiddiisa, balse ma aysan sheegin sida ay farsamo suuragal ku noqonayso in Somalia laga qabto doorasho qof iyo cod ah oo ay ka qayb qaadanayaan axsaab siyaasadeed.
”Waxaa Guddiga Doorashooyinka sharaf u ah inuu dalka ka qabto Doorasho qof iyo cod ah,” ayay tiri Guddoomiye Xaliimo Yareey.
Waxay sheegtay in la qaban doono howlo ay ka mid tahay diiwaan gelinta cod bixiyeyaasha iyada oo la adeegsanayo nidaamka elektaroonigga ah ee Biometrics, kaarar u qaybintooda, diiwaan gelinta musharrixiinta iyo qabashada araajidooda.
Waxay sidoo kale ku dhawaaqday in muddada lagu qabanayo diiwaan gelinta cod bixiyeyaasha doorashadaas ay qaadanaysa 13 bilood, taasoo ka bilaabmaysa bisha Luulyo ee soo socota ila bisha Agoosto ee 2021-ka, waana dookha 1-aad oo ka dhigan in DF loogu darayo 6 bilood oo farsamo ah.
Dhookha labaad, waa mid la raacayo habka taqliidiga ee diwaangelinta gacanta taasoo qaadanaysa muddo 9 bilood ah, tanna waxay sheegtay in doorashadu dhici karto 21-ka Maarso 2021-ka.
”Si arrimahan loo guda galo waxaan Baarlamanka ka codsanaynaa inuu lasoo dhaqsado sharciga xisbiyada,” ayay codsatay Xaliimo Yareey.
Previous articleDEG DEG: Kulankii Baarlamanka oo furmay & metelaaddii Gobolka Banaadir oo la meel mariyey!
Next article”Waannu ka tashanaynaa!’ – Xildhibaanno ka tirsan Baarlamanka Puntland oo ka hor yimid meel marinta metelaadda Muqdisho